Nhau - Fibc Bags Musika
Fibc Bags Musika
FIBC bhegi，jumbo bhegi，Mabhegi akawandisa akashandiswa kune akasiyana maindasitiri, zvekurima, zvemishonga, nezvimwe zvigadzirwa. Nekudaro, kune kuwedzera kwakasimba mukuda kwemabhegi mazhinji nekuda kwekukwira kuri kuita zvikamu, zvakaita semakemikari nefetiraiza, chikafu, kuvaka, mishonga, kuchera, nezvimwe. Kunze kwezvo, kuwedzera kwenhamba yemabhizinesi uye ekugadzira zvikamu zvinowedzera muhomwe hombe mabhegi kukura kwemusika.
Hombe / jumbo mabhegi anowanzo ari asiri-akarukwa fomati ine yakakwira tensile simba uye mamiriro ekunze kuramba. Iwo akagadzirwa zvakanyanya kuti ape kugadzikana uye nyore kwekutakura nekuchengeteka, kunyangwe paine kugona kwavo kutakura huwandu hwakawanda. Iko kusimukira kwekutarisa kwevagadziri uye vagadziri pane anoshanda uye anodzivirira mhinduro kune epasirese uye epamba hombe hombe mabhegi ndiyo yakakosha yekutyaira kuseri kwekuwedzera kwemusika kudiwa.
Musika unoda kuti zvigadziriswazve, zvishandiswezve, uye zvisine kusvibiswa-zvisina mapakeji mhinduro kutsiva huni nemakadhibhokisi. Iko kudiwa kwekudzivirira kukuvara uye kusvibiswa kune FIBC mitoro, iyo vatengi vakasimbisa seyakanyanya kudiwa, inokurudzira hombe bhagi vagadziri kugadzira mhinduro nyowani muchikamu chikuru. Mhinduro idzi dzinogona kuzadzikisa zvido zvevagadziri vanoda kuti nhumbi yavo isvike isina kukuvadzwa kwayiri kuenda, kungave kutakura mudzimba kana nepasi rese.
Nekudaro, mune isiri-bhizinesi bhizinesi, iyo hombe nhumbi yakakura zvakanyanya mu2020, kunyanya kune fetiraiza. Vagadziri vakawedzera dzimba dzekuchengetera fetereza, kwavanogona kushandura zvinhu zvakawandisa kuita mabhegi uye voisa mabhegi mumotokari dzenjanji. Paive zvakare nekukwidziridzwa kwesimba mukugadzirwa kwefetiraiza. Zvakare, musika muhomwe wemabhegi unofungidzirwa kuti uchaona mikana yakasimba yemusika pamwe nekuwedzera kuri kudiwa.
Zvazvino maitiro anoonekwa mumusika wehomwe hombe anosanganisira 100% biodegradable uye inogona kuenderera hombe mabhegi akagadzirirwa kuburitsa yakasimba, yakasimba, uye yakawanda-yekushandisa kugona.
Mimwe miitiro mikuru yeindasitiri inosanganisira kuziva kwakanyanya nezve mabhenefiti ekusimba kwesimba uye kusagadzikana kwemamiriro ekunze uye kudiwa kwekukwidziridza mutengo wese wevaridzi inotungamirwa nemakwikwi asingaperi uye kumanikidza kwemahara. Zvakare, kuwedzera kuomarara kwemunharaunda, kwedunhu, uye kwepasi rese kubatana kunoda huwandu hwakawanda hwenzira dzekufambisa dzinotsigira saizi yemusika.
Kunyangwe paine tariro dzinovimbisa, musika wemabhegi mazhinji uchiri kupupurira matambudziko akati wandei. Izvi zvinokuvadza zvinotadzisa zvinhu zvinosanganisira zvakasarudzika mirayiridzo yehurumende nezvekuchengetedza kwechigadzirwa uye nemutengo wakakwira unodiwa kumisikidza michina yekugadzira. Zvakare, iko kudiwa kwekusangana nemhando dzakasiyana dzemitemo uye kodhi mvumo yekuchengetedza chigadzirwa chinhu chikuru chinotungamira kumusika.
Iyo hombodo yemabhegi kuongororwa musika yakakamurwa kuita machira erudzi, kugona, dhizaini, vashandisi-vekupedzisira, uye dunhu. Iyo jira remhando chikamu chidiki-chakakamurwa kuita mhando A, mhando B, mhando C, uye mhando D. Chikamu chemagetsi chakakamurwa kuita chidiki (kusvika 0.75 cu.m), chepakati (0.75 kusvika 1.5 cu.m), uye hombe (pamusoro pe 1.5 cu.m).
Chikamu chekugadzira chakakamurwa kuita u-mapaneti mabhegi, mana epaneru mapaneru, mabhaffles, denderedzwa / tafura, makona echinjikwa, nevamwe. Chikamu chevashandisi vekupedzisira chakapatsanurwa kuita makemikari nefetiraiza, chikafu, kuvaka, mishonga, kuchera, nevamwe.